Drafitra hotely Radisson any Nizeria, Côte d'Ivoire, Maroc, Tonizia, Nizeria ary Guinea
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Drafitra hotely Radisson any Nizeria, Côte d'Ivoire, Maroc, Tonizia, Nizeria ary Guinea
Oktobra 2, 2018
Ny paikadin'ny fitomboan'ny Radisson Hotel Group any Afrika dia fandraisana andraikitra lehibe ao amin'ny Destination 2022, drafitra fandaminana stratejika maharitra dimy taona an'ny Vondrona, miaraka amin'ny tanjona ho tonga iray amin'ireo orinasa hotely telo lehibe eran-tany.
Ny vondrona dia manana trano fandraisam-bahiny 90 sy efitrano 18,000+ miasa ary eo an-dàlam-pamolavolana manerana ny firenena 31, ary mikasa ny hahatratra trano fandraisam-bahiny 130 sy efitrano 23,000+ any Afrika amin'ny 2022.
Andrew McLachlan, filoha lefitra zokiny, fampandrosoana, Afrika atsimon'i Sahara, vondrona Hotely Radisson, dia nilaza hoe: "Faly izahay fa manambara fifanarahana hotely 10 vaovao ao anatin'ny sivy volana, izay mitovy amin'ny fanaovana sonia vaovao isam-bolana. Ny fanaovan-tsonia tsirairay dia mifanaraka mifanaraka amin'ny stratejika hanatanterahana ny drafitra fampandrosoana fivelomanay mandritra ny dimy taona, amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tsena vaovao, ny fampidirana marika vaovao ary ny fitomboan'ny fitomboana any amin'ny toerana ifantohan'ny Africa. Hatreto amin'ity taona ity dia hanampy efitrano 1,300 XNUMX+ ho an'ny portfolio-nay aty Afrika izahay ary mikasa ny hanohy ity fitomboana haingana ity amin'ny alàlan'ny fanitarana bebe kokoa ireo tsena lehibe manerana ity kaontinanta mandroso ity. ”
Ho fanampin'ny hotely Radisson Hotel & Apartments Abidjan Plateau sy Park Inn avy amin'ny hotely Radisson Lusaka Longacres dia nambara tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ny tolotra hotely valo sisa dia misy:
Radisson Collection Ikoyi Lagos, Nizeria
Radisson Collection, fanangonana fomba fiaina premium an'ny vondrona misy trano fandraisam-bahiny miavaka amin'ny toerana tsy manam-paharoa no laharam-pahamehana ao Ikoyi, Lagos ary izy no 3rdHotely Radisson Collection any Afrika. Ity trano fandraisam-bahiny lafo vidy ity dia apetraka amin'ny faritra avo any amin'ny Nosy Lagos, eo amoron'ny Lagos Lagoon.
Voalahatra hisokatra amin'ny taona 2020, ny trano fandraisam-bahiny dia hanana efitrano 165, ao anatin'izany ny efitrano manara-penitra sy ny toeran'ny mpanatanteraka ary ny filoham-pirenena. Hanana sakafo sy zava-pisotro be dia be ny trano fandraisam-bahiny miaraka amina toeram-pivarotana enina samy hafa natao ho an'ny traikefa fisakafoanana tsy hay hadinoina, ao anatin'izany ny fisakafoanana mandritra ny tontolo andro sy ny trano fisakafoanana manokana ary koa ny café ao amin'ny lobby ary bara telo izay hamorona sehatra ara-tsosialy mavitrika. Ny trano fandraisam-bahiny dia hanasongadinana fihaonambe sy faritry ny hetsika marobe, ahitana toeram-pivarotana valo samihafa izay afaka mampiantrano olona 400 mahery. Ny habaka sosialy dia hisy spa, gym ary pisinina.
Radisson Hotel Lagos Ikeja, Nizeria
Mampahafantatra ny hotely voalohany misy marika Radisson any Nizeria, ny marika ambony izay manome serivisy ho an'ny tena manokana amin'ny toerana manintona sy ankehitriny.
Any Ikeja, renivohitry ny Fanjakan'i Lagos, no misy ny hotely ao amin'ny Highway Highway Mobolaji Anthony, làlambe iray mampitohy an'i Ikeja sy ny sisa ao Lagos. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, izay mitentina 50% ny fifamoivoizana an'habakabaka rehetra ao Nizeria dia 1km miala ny hotely.
Ny trano fandraisam-bahiny dia manana efitrano 92 izay misy efitrano mahazatra sy deluxe ary koa efitrano namboarina mba hahafinaritra ny saina. Izy io koa dia manana toeram-pisakafoanana sy zava-pisotro telo samy hafa, aingam-panahy ao an-toerana, ao anatin'izany ny trano fisakafoanana fisakafoanana, fisotroana ary terrain-pisinina mandritra ny andro. Ny faritry ny fihaonana sy ny hetsika dia hisy toeram-pivarotana telo samy hafa sy ivon-toerana fandraharahana. Ankoatr'izay, ny hotely dia manana efitrano fandraisam-bahiny manokana ho an'ny ekipa fiaramanidina, spa, gym ary piscine.
Park Inn avy amin'ny Radisson Serviced Apartment Lagos VI, Nizeria
Ary manao ny laharam-pahamehana ao Lagos ihany koa ny marika midscale ambony mitombo haingana, Park Inn avy amin'i Radisson, izay hanokatra trano misy serivisy, eo akaikin'ny Adetokunbo Ademola Street, làlambe lehibe ao amin'ny Nosy Victoria.
Tafiditra amin'ireo trano fandraisam-bahiny 55 amin'izao fotoana izao, ny hotely dia hanolotra toeram-pivarotana sakafo sy fisotro efatra ihany koa izay fisakafoanana fisakafoanana, fisotroana ary terraces roa ivelany. Ny faritry ny fivoriana sy ny hetsika dia misy efitrano fivoriana telo malefaka mahatratra 120 sqm. Ny toeram-pialam-boly dia misy gym sy piscine.
Radisson RED Hotel Abidjan, Côte d'Ivoire:
Ny Radisson RED Hotel Abidjan dia sonia Radisson RED faharoa an'ny Radisson Group any Afrika ary izy no ho trano fandraisam-bahiny manana endrika ambony voalohany any Abidjan, renivohitra lehibe eto Afrika. Ny hotely dia miorina eo amin'ny Boulevard de Gaulle, eo amoron'ny lagoon any Plateau, ny distrikan'ny orinasa voalohany ao Francophone Africa Andrefana, ary ny toerana an-tanàn-dehibe mety tsara ho an'ny marika iray izay mitodika any amin'ny fomba mahazatra.
Ilay trano fandraisam-bahiny namboarina vaovao, kasaina hisokatra amin'ny 2021, dia hanana efitrano 165 ahitana efitrano sy efitrano fampiasa misy sary matevina sy rindrina misy fihetsika. Ny fanolorana sakafo ao amin'ny hotely dia ahitana Redeli, trano fialantsasatra premium misy fanahin'ny fisotroana ary koa OuiBar, bar any an-tampontrano ary terrasse misy fahitana amin'ny tanàna sy ny ranomasina. Ny fialam-boly dia misy dobo filomanosana eo an-tampon-trano sy gym fanaovana fanatanjahan-tena feno, mamorona sehatra ara-tsosialy mifampiresaka. Ny faritra fihaonana sy ny habakabaka misy ny hetsika dia hanapaka ny fomban-drazana misy studio maoderina hetsika sy efitrano famakiana efatra.
Amin'ny maha-marika fandraisam-bahiny mitombo haingana indrindra an'i Afrika, Radisson Blu, dia hiditra amin'ny foibe ara-bola laharana voalohany any Casablanca, amin'ny fisokafan'ny Radisson Blu Hotel, Casablanca amin'ny taona 2019. Ny hotely dia miorina eo amin'ny distrikan'ny tanàna sy eo am-baravaran'ny manintona lehibe toy ny Old Medina (tanàna taloha) manaitra, Casablanca Marina ary Moske Hassan II, moske lehibe indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny trano fandraisam-bahiny vaovao dia misy efitrano 120, miaraka amina efitrano sy suite fampiasa mahazatra. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny sakafo eo an-toerana, ny toeram-pivarotana sakafo sy zava-pisotro dia hisy trano fisakafoanana sy fisotroana roa, miaraka amin'ireo toeram-pialam-boly misy gym sy salon fanaovana hatsaran-tarehy feno fitaovana. Ny efitrano fivoriana malalaky ny trano fandraisam-bahiny dia hatsangana mihoatra ny 456m².
Park Inn avy amin'i Radisson Tunis:
Miditra ny renivohitra sy ny tanàna lehibe indrindra ao Tonizia ny Radisson Hotel Group miaraka amin'ny Park Inn avy amin'i Radisson Tunis. Ny trano fandraisam-bahiny dia ho hita eo afovoan-tanàna be olona, ​​5km miala ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Tunis-Carthage, miaraka amin'ny lalana mora mankany amin'ny lalambe. Avy eo amin'ny elanelana kely ihany koa avy eo amin'ny Station Tunis Train sy ny distrikan'ny Avenue Habib Bourguiba ary ny Avenue Mohamed V. Ny Medina misy tsangambato 700, lapa, mausoleum ary ny Moskea Lehibe dia 1.5km miala ny hotely.
Ny trano fandraisam-bahiny dia ahitana efitrano 102, miaraka amina efitrano sy suite mahazatra. Ny safidy amin'ny sakafo sy zava-pisotro dia ahitana trano fisakafoanana sy fisotroana any an-tampon-trano, ary ny toeram-pialan-tsasatra kosa dia misy gym. Ny trano fandraisam-bahiny dia ho vonona tsara amin'ny fivoriana sy hetsika miaraka amin'ny efitrano fivoriana lehibe, izay haorina amin'ny velaran-tany 261m² ary ahitana efitrano fihaonambe telo, efitrano fivoriana telo ary efitrano fivoriana.
Radisson Blu Hotel Niamey, Nizera
Miditra amin'ny tsena afrikanina vaovao, hisokatra ny Radisson Blu Hotel, Niamey vaovao amin'ny taona 2019. Nizera, renivohitr'i Niger ary ivon-toerana any Francophone Africa Andrefana dia ao anatin'ny ECOWAS ihany koa ary hanamafy ny toerana misy ny stratejika Radisson Hotel Group any Andrefana. Afrika. Ny hôtely dia hitarika ny tsena ho an'i Niamey satria mameno ny banga ny hotely misy marika iraisam-pirenena manerantany ao amin'ny faritra.
Ny trano fandraisam-bahiny 196-efitra dia ahitana karazana efitrano dimy samy hafa, ao anatin'izany ny suite filoham-pirenena sy mpanjaka. Ireo toeram-pivarotana sakafo sy zava-pisotro dia hanolotra safidy isan-karazany koa ao anatin'izany ny trano fisakafoanana roa, fisotroana roa ary efitrano fandraisam-bahiny. Ny faritry ny fivoriana sy ny hetsika dia manodidina ny 1252m², ao anatin'izany ny efitrano fihaonambe, ivon-toeram-pivarotana ary efitrano fivoriana isan-karazany. Ny trano fandraisam-bahiny koa dia hanisy spa, efitrano fanaovana spaoro ary dobo filomanosana.
Radisson Blu Hotel Conakry, Repoblikan'i Guinea
Miditra ao Conakry, renivohitr'i Guinea sy ivon'ny Francophone Africa Andrefana i Radisson Blu ary kasaina hisokatra amin'ny taona 2019. Hitarika ny tsenan'ny hotely ambony Conakry ny hotely miaraka amin'ny toerana misy azy, ny fidirana ary ny marika iraisam-pirenena ambony.
Ny hotely dia miorina tsara eo akaikin'ny afovoan-tanàna ary voahodidin'ny Convention Center, Palais du Peuple, ny Hopitaly nasionaly ary ny masoivoho maro. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Conakry dia latsaky ny 10km.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia ahitana efitrano fandraisam-bahiny 123, ahitana karazana efitrano dimy samy hafa, ao anatin'izany ny efitrano filoham-pirenena roa. Ny fanolorana sakafo sy zava-pisotro dia misy fisakafoanana mandritra ny tontolo andro sy trano fisakafoanana manokana, efitrano fisakafoanana ary fisotroana. Ny faritry ny fihaonana sy ny hetsika dia mivelatra mihoatra ny 415m² ahitana efitrano fivoriana efatra malefaka. Ny trano fandraisam-bahiny koa dia hanisy spa, efitrano fitsaboana ary dobo filomanosana.
Ahoana ny fampiroboroboana ny seranam-piaramanidina Abu Dhabi amin'ny fomba fiaina salama?
SkyWest, Inc. Nantsoina hoe Justin Esplin ho VP